» भुपेन्द्र घटनामा इन्सपेक्टरका भाई पक्राउ, डीएसपीका काकाका छोरा कहाँ छन् ? भुपेन्द्र घटनामा इन्सपेक्टरका भाई पक्राउ, डीएसपीका काकाका छोरा कहाँ छन् ? – हाम्रो खबर
काठमाडौं । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ का २३ वर्षीय भुपेन्द्र बडुवाल घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ । घटनामा सं’ल’ग्न केही ब्य¥क्ति पक्राउ परेका छन् । भुपेन्द्रका परिवारले करिब १६ जनाको नाममा जा’हे’री दि’ए’का छन् । घटनामा प्रहरीका इन्स्पेक्टरका भाइ पनि सं’ल’ग्न र’हे’को र उनी फ रा र रहेको बताइएको थियो । प्रह¥रीले उनै इन्सपेक्टरका भाई मदन शाहीलाई पक्राउ गरेको छ ।
उनी इटहरीबाट पक्राउ परेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । उनलाई केही बेरमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरी जनाएको छ । गएको साता टीकापुरामा भुपेन्द्रको ह ‘त्या भ’ए’को थियो । होटल संगम चिसापानीका सञ्चालक नवीन रावलको योजनामा खु’कु’री प्र’हार ग’रेर घटना गराएको प्रहरीले दावी गरेको छ ।
घटनामा सं’ल’ग्न भ’ए’को आरोपमा लम्कीचुहा नगरपालिका–३ चिसापानी बस्ने २४ वर्षीय महेश रावल, २० वर्षीय आर्यन देवकोटा, २० वर्षीय धिरज शाही, ल¥म्कीचुहा नगरपालिका–१ बस्ने २२ वर्षीय कपिल श्रेष्ठ तथा सोही ठाउँ बस्ने १८ वर्षीय किशोर पक्राउ परिसकेका छन् ।
यस्तै टीकापुर नगरपालिका–१ बस्ने २३ वर्षीय प्रवीन रिमाल, टीकापुर नगरपालिका–१ बस्ने २१ वर्षीय रोहित आले, बस्ने २६ वर्षीय सोहन शाह र लम्कीचुहा नगरपालिका–५ का २८ वर्षीय विकास खड्का पक्राउ परे¥का छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भुपेन्द्रमाथि आर्यन देवकोटाले च’¥क्कु प्र’¥हा’र ग’रे’को देखिएको छ ।
काठमाडौंमा बस्दै आएका बडु¥वाल दसैं मान्न घर फर्किएका थिए । अमेरिका जाने तया¥रीमा रहेका उनी आवश्यक प्र¥क्रिया पूरा गर्न काठमाडौं आएका थिए । तिहारपछि उनी काठमाडौं फर्किने योजनामा थिए । स्रोतका अनुसार घटनामा एकजना डीएसपीका काकाका छोरा पनि फ ‘रा ‘र छन् ।